Dibenzylidene sorbitol Transparent Nucleating Agent inogona kukamurwa kuita matatu marudzi. Chizvarwa chekutanga iDBS. Ichi chigadzirwa chine dhigirii yakaderera yekubvumidzwa uye yakawandisa yakasimba aldehyde kuravira. Zvichakadaro, nekuda kwenzvimbo yayo yakadzika yakanyunguduka ...
Chii chinonzi Transparent Nucleating Agent
Izvo zvakajairika pachena nucleating vamiririri zvinogona kukamurwa kuita maviri marudzi: organic makomponi uye inorganic makomponi. Inorganic Nucleating Agents anonyanya oxides esimbi, senge talc, silica, titanium dioxide, benzoic acid nezvimwewo ....
Iko Kuvandudza kwePolypropylene
Nekuda kweye yakanyanya kupisa tembiricha, mwenje wakasarudzika giravhiti, nyore kugadzirisa uye kuumba, nyore kudzokororazve, uye mutengo wakaderera, polypropylene yave ichishandiswa zvakanyanya mumakemikari indasitiri, kemikari fiber, mudziyo wemumba, kurongedza, indasitiri yechiedza uye mamwe maindasitiri. Howe ...
Deredza Haze uye nekuvandudza iyo Kujeka kwePolypropylene
ne admin pane 20-09-18
Kujekesa Mumiriri kunogona kushandiswa kudzikisira husi nekusimudzira kujekesa kwepolypropylene kuburikidza neiyo nucleation yeiyo polymer. Izvi zvakare zvinotungamira mukusimudzira kuomarara kwechikamu chakaumbwa uye kupfupisa kutenderera nguva panguva yekuumba ...
Kumirira Iwe muSenzhen 2021!
Chinaplas ndeimwe yeakanakisa kuratidzwa munyika yerabha uye epurasitiki mbishi zvigadzirwa izvo zvinonyanya kukosheswa neese mushanyi uye anoratidzira ipapo. Gore rakapera, panguva yekuratidzira, munhu wese akaramba akanyanya kufarira kune mumwe nemumwe ...